प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने गिरिजा देखि केपि सम्मा! कसले ,किन गरे भंग? - Nepal Sanchar
८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०४:५५
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने फैसला गर्‍यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा विघटनको शृङ्खला यो छैटौँ हो। जसमा सबैभन्दा बढी एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका छन्। ओलीकै पालामा दुई पटक सभा विघटन भए।
आफूले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाउने भन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बिहीबार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए। लगत्तै संविधानको धारा ७६९५० बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। आह्वान अनुसार शुक्रबार प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत नपाउने भन्दै नयाँ सरकार बनाउन सिफारिस गरेका वहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै शीतल निवास पुगेर फेरि नेतृत्व दाबी गरे। त्यसपछि विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
ओली सरकारले यसअघि पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको थियो। जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते पुनस् स्थापना भएको थियो।
यस्तै, नेकपा एमालेबाट प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीले २०५२ साल जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उनले विघटन गरेका थिए। उक्त विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना भएको थियो।
साभार पहिलो पोष्ट